होसियार !! खाना खाने बित्तिकै पानी पिएमा यस्ता रोग लाग्न सक्छ !!
आयुर्वेदका अनुसार खाना खाने बित्तिकै पानी पिउनु हुन्न ,पानी पिउनु हानिकारक हुन्छ । आयुर्वेदका अनुसार भोजन पछि पानी पिउनु बिष समान हुन्छ । पानी तुरून्त पिउनाले त्यसको असर मानिसको पाचन क्रियामा पर्दछ । हामी जुनसुकै कुरा पनि खाने गर्दछौं, त्यो हाम्रो नाभिको बायाँ भागमा स्थित जठराग्निमा गएर पच्ने गर्दछ ।
मोटा मानिसले सुत्नुभन्दा अगाडी भुलेर पनि नखानुहोस यी खानेकुरा
मोटोपन धेरै मानिसको लागी चिन्ताको बिषय हो । धेरै मोताउनुको अर्थ रोग जन्माउनु भन्ने पनि बुज्ने गरिन्छ । मानिसहरु आफ्नो तौल घताउनको लागी धेरै उपायहरु अपनाउने गर्छन् । तर उनीहरुको सा-साना गल्तिले गर्दा शरीरको तौल झन् बढ्ने गर्छ । त्यस्तै गल्तिहरु मध्ये हामीले गर्ने गल्ति भनेको हामीले राति खाने खाना
गर्मी बढ्यो, ६२ डिग्री तापक्रम पुगेपछि जल्न थालेका सडकका रुखहरु
गर्मी मौसम सुरु भइसकेको छ । यहीक्रममा सामाजिक सञ्जालमा गर्मी बढ्दा सडकका रुखहरु जलेको भन्दै सार्वजनिक भएका फोटो भिडियो भाइरल भइरहेको छ । ती भिडियो र फोटोमा सडक किनाराका खजुरकासहित अन्य रुखहरु जलेको देखिन्छ । साथै सडकमा राखिएका ट्राफिक लाइटसमेत पग्लिएको छ । यस्तो कुवेतमा भएको हो । अहिले त्यहाँको
हट मोडल सबिता कार्की पहिलो पटक महिनावारी स्कुलमा भए, खुलेर बोलिन (हेर्नुहोस् भिडियो)